Drôna ho an'ny fampiasana sivily matihanina, photogrammetry ao anatin'ny minitra. - Geofumadas
Drones ho an'ny fampiasana ny sekta Professional, photogrammetry amin'ny minitra.
Febroary, 2014 Featured, fanavaozana, topografia
Ny fahafantarana ny fiasan'ny orinasam-piara-miasa dia manome antsika fahafaham-po amin'ny fahafantarana ny niandohan'ny zavatra, fa koa ny fanararaotana vaovao.
Mitranga izany ho antsika izay nahalala ny fomba nentim-paharazana amin'ny photogrammetry, sy ny fetrany mahatsiravina; rehefa naharitra herinandro ny fihodinan'ny fakana, ny famafana, ny fanaovana maodely ary ny famokarana ny vokatra farany, raha tsy amam-bolana arakaraka ny velarana misy azy. Tsy azo natao ny nanao azy io tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny taona, voafetra ny famaritana ary mazava ho azy fa lafo be ny vidiny.
Ny sary hita ato amin'ity lahatsoratra ity, ny 100 hektara ny ahy dia babo tamin'ny fotoana 30 minitra any an-tsaha, fa ny faharoa dia manana sary 10 minitra fotsiny ny fanandratako, vokatra izay mety hiteraka afa-tsy ny orthophoto, miolakolaka ambaratonga, profil andalana, avy amin'ny modely niomerika.
Na dia maro aza ny safidy hafa, dia te hanararaotra hampiseho ny asan'ny orinasa Espaniola izay nahasarika ny sainay izahay. Ity ampahany amin'ny resadresaka iray:
Iza ireo ATyges?
ATyges dia orinasam-pambolena manana sehatry ny asa natao ho an'ny RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), samihafa avy amin'ny hetsika nentim-paharazana amin'ny tetikasa, fitantanana fanorenana sy ny angovo angovo.
ATyges dia manolotra ny fitaovan'ny serivisy amin'ny fitaovana manokana amin'ny dingana voalohany amin'ny hetsika ara-barotra, ary koa ny fivarotana ny rafitra ho an'ny antoko fahatelo, izay tanjona farany.
Inona avy ireo teknikan'ny teknikan'ny drone?
Tianay ny manavaka ny drôna ho ampahan'ny rafitra iray fa tsy dia ny vokatra mihitsy. Manavaka ny "faritra manidina", ny "faritra tsapa" ary ny "ground station" isika.
Ny ampahan-drivotry ny drone dia manana ny andraikitra hiantohana ny fifehezana ny kalitaon'ny rivotra sy ny kalitao, na semi-assisté iray avy amin'ny mpandraharaha iray ary tsy miankina amin'ny drafitry ny sidina mialoha. Ity ampahany ity dia manana drafitra ho an'ny fitantanana ny angovo sy ny herinaratra ary ny sehatra elektronika ho an'ny fanaraha-maso, fanaraha-maso ny rafitra sy rohy amin'ny onjam-peo eny amin'ny tobin-tany.
Ny Tsikariny anjara dia ahitana bedplate giroestabilización sensor birao mba wean ny toerana izany ny fironan'ny ny fiaramanidina sy ny sensor mihitsy ny firotsahana ho an'ny asa fitoriana ary mety ho hita maso karazany, infrared karazany na maro / spectral Hyper, arakaraka ny masontsivana ho azo.
Ny foibem-bahoaka dia ahitana ny angon-drakitra sy ny rohy video ho an'ny fanaraha-maso ny ampahany roa teo aloha, noho izany dia azonao atao ny mitantana navigation sy sensor na manara-maso azy ireo raha sendra mandeha.
Fahaiza-manaony sy ny autonomies ny fitaovana miankina amin'ny vesatry ny fandoavam-bola amin'ny fandefasana entana sy ny tontolo iainana toe-javatra, satria mahazatra autonomies eo 15-25 minitra ho an'ny fitsipika Sela Mpandray Hafanana, anefa, dia zavatra izay namboarina araka ny ilain'ny asa fitoriana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny rindrambaiko fivoahana amin'ny drone?
Misy fombafomba hafa:
Amin'ny fomba maodely, misy làlan-dàlana na fandehanana an-dàlambe dia apetraka ao amin'ny solosaina miaraka amin'ny paikady mifehy, izay ahafahan'ny mpitsidika miasa ary amin'ny fanosehana ny bokotra iray eo amin'ny sehatra dia ny drone dia hanao ny volavolam-panafana efa voalahatra.
Ao amin'ny fomba fiasa semiautomatic, ny tohodrano dia mitazona ny toerana sy ny haavony voafaritra tsy miankina, mamela ny hifantohana amin'ny fikarakarana ny sensor. Ny hetsika rehetra dia hitantana sy hitarika amin'ny automatisme, dia hanondro ny fihetsiketsehana tokony hataon'ny drone ary izy no miandraikitra ny fivoahana araka ny tanjona tiany, na inona na inona ny rivotra na ny antony hafa.
Ny fandidiana dia azo atao amin'ny PC na tablette misy fifandraisana tsy misy tariby. Ny masontsivana lehibe indrindra momba ny sidina dia alefa any amin'ny gara sy amin'ny fanaraha-maso amin'ny onjam-peo amin'ny alàlan'ny fantsona roa, hahafahana manara-maso ny fihetsiky ny drôna amin'ny fotoana tena izy.
Ny safidin'ny sidina rehetra dia voarakitra ao amin'ny karatra mini-SD ao amin'ny drone raha te-hanadihady raha ilaina.
Raha misy olona te hividy vondrona iray, inona no fe-potoana mandra-panafana?
Ny fotoana fandefasana ireo fitaovana dia enina herinandro aorinan'ny filaharany, na dia ao anatin'ny fotoana fohy kokoa aza ny fanaterana. Mandritra ny fanangonana sy ny fanandramana ireo fitaovana, ny mpanjifa dia mandalo ireo dingana samihafa amin'ny programa fampiofanana ho an'ny mpampiasa, izay ankoatry ny fampianarana ny fikirakirana ireo ampahany rehetra amin'ny rafitra, dia ampianarina amin'ny fikirakirana an-tanana ny drôna izy ireo. , ho toy ny dingana farany fiarovana raha toa ka tsy mahomby ny mandeha ho azy na very ny famantarana GPS noho ny antony ivelany.
Raha mieritreritra aho fa manidina metatra an-jatony fotsiny ny fampiasam-bola amiko, dia miteraka fihodinana kely. Inona no fiantohana ananan'ny fitaovana?
Ny antoka lehibe indrindra amin'ny rafitra dia ny fahatsorany amin'ny fampiasana azy, satria raha tsy misy ny fandraisana andraikitra dia mijanona ho marin-toerana amin'ny toerany sy ny haavony ny fitaovana, tsy miankina amin'ny hetsika ivelany ataon'ny rivotra, ary ny mpandraharaha ihany no manosika anao hanova na hanova ny toerana misy anao.
Na izany aza, miaraka amin'ny mora ny fampiasana ny teknolojia, ny fiarovana no tena singa, dia toy izany no ampiharina teny rafitra sy ny fiarovana mandeha ho azy raha toa ka very ny tsato-kazo famantarana, fahaverezan'ny maotera na mitete vatoaratra hitondra fanaraha-maso fitaovana autonomously mba hamokatra ny hiverina ny maka-fipetrahana lavitra sy mandeha ho azy.
Ireo mari-pamantarana manan-danja lehibe dia manara-maso tsy tapaka ny mpandraharaha amin'ny fampisehoana LCD amin'ny baiko fitondrany, mamoaka fampitandremana manga sy mazava ho azy raha sendra misy ny tsy fetezana amin'ny sidina.
Misy karazana protocoles manokana amin'ny fanaraha-maso ny rafitra alohan'ny hanombohan'ny misiona, ary raha misy tsy fantatra ny eny an-kianja, dia manakana ny fitaovana tsy hampiasaina izany.
Ny herin'ny elektronika sy ny rafi-pitantanana ampiasaina dia manome antoka ny fahombiazan'ny fahombiazana, ary hatramin'izao dia tsy nanana tatitra momba ny olana tamin'ny sidina izahay.
Ny fitaovantsika dia azo antoka amin'ny tany raha toa ka tsy mahomby ny manala azy noho ny fahadisoana na ny tsy fahombiazan'ny singa iray.
Inona avy ireo fangatahana azo atao amin'ny drone eo amin'ny sehatry ny Engineering Civil?
Noho ny natioran'ny orinasa misy antsika eo amin'ny sehatry ny fananganana sy ny tetik'asa momba ny sivily dia misy ny fifantohana bebe kokoa sy ny fivoaran'ny rafitra lehibe.
Ny tombontsoa lehibe dia hoe ny rafitra napetraka ho fitaovana amin'ny mpiasa ara-teknika, ary noho izany dia mifototra ny automation sy ny programa fampiofanana, ho fitaovana fanampiana tsotra ho an'ny fanangonana tahiry fa tsy fitaovana tena ilaina mpiasa manokana.
Drones dia ampiasaina mba:
Ny fanaraha-maso ny asa,
hojerena ny sary XnUMXº ary,
indrindra indrindra fa ny maka sary momba ny serasera amin'ny fampiasana teknolojia fototarazo.
Amin'izany fomba izany no ahafahanao mianatra asa ao amin'ny seha-pifaneraserana, manatontosa fandaharam-potoana sy ny habaka ao amin'ny fanangonana, ny fanaraha-maso ny fanamarinana, ny fandalinana ny fandaharam-pianarana toy ny fialofana sy ny fanaraha-maso.
Ny fampiharana hafa momba ny teknolojia dia avy amin'ny asa eo amin'ny sehatra toy ny angovo:
Ho fanaraha-maso ny valan-javaboahary fotovaly, thermosolar sy rivotra,
fanaraha-maso ny orinasa indostrialy
fanaraha-maso ny herinaratra, elektrôla,
fanaraha-maso ny famoahana, famerenana ny sécurités et lines,
Ny orinasanay dia te-hanolotra ny tsena fa tsy vokatra marefo, fa rafitra iray manontolo ho an'ny fanorenana: ny TOPODRON SYSTEM, izay nanao sonia fifanarahana fifanarahana miaraka amin'ny Oniversiten'i Jaén sy ny vondrona mpikaroka «Photogrammetric sy Topometric Systems» mba hanatsarana ny vokatra farany ary vao haingana dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny orinasa Soisa PIX4D mba hanomezana fahazoan-dàlana rindrambaiko PIX4D mapper miaraka amin'ny drôna antsika; rindrambaiko manokana ho an'ny photogrammetry an'habakabaka hahazoana orthomosaics, maodelin'ny terrain nomerika, cloud cloud ary fampahalalana naverina tamin'ny alàlan'ny fanondranana any amin'ny CAD sy GIS. Amin'izany fomba izany dia mihidy ny faritry ny fanolorana vahaolana farany ho an'ny mpanjifa:
Drone team + Flight planning + photogrammetric software matihanina
ATyges dia te-hizaha ny tontolon'ny varotra UAV ho toy ny orinasam-pifandraisana, manolotra vahaolana farany amin'ny teknolojia farany ary amin'ny vidiny ara-drariny sy azo vidiana, izay mampiavaka azy mazava tsara amin'ny fitaovana sy orinasa hafa.
Ho famaranana, fomba hafa mahaliana.
Previous Post«Previous Ny faminaniana 2014 momba ny tontolon'ny geofumado: Paul Ramsey
Next Post Mpamadika an-tserasera maimaimpoana ho an'ny angona GIS - CAD sy Rastermanaraka »
152 Mamaly ny "Drones ho an'ny fampiasana sivily matihanina, photogrammetry ao anatin'ny minitra."
yeison pallares hoy izy:
Mey, 2019 ao
Miarahaba, tiako ny fametrahana ny fitaovana miaraka amin'ny rindrambaiko, toro-hevitra kely momba ny ampahany amin'ny drone, ny toetrandro, ny fotoana famindrana ny fitaovana, ny fandaniana sy ny toro-hevitra momba ny fampiasana fitaovana, izany rehetra izany ho an'i Kolombia, misaotra betsaka
Esteban Perez hoy izy:
Ahoana no ahafahako mahazo drone ary inona no vidiny, mila izany aho amin'ny fizotrany, dia tena ilaina izy ireo.
Gary Janco hoy izy:
Angataho aho hilaza ny mailako: riga.metrix@gmail.com Bolivia Potosí
Yudith PP hoy izy:
Martsa, 2019 ao
Tiako ny vidin'ny drôna, ny rindrambaiko ho an'ny fanaraha-maso kadastaly izay mampifanaraka amin'ny drôna, fampiofanana fitantanana drôna, fampiofanana fitantanana rindrambaiko.
Eduardo A Barrera hoy izy:
Mangataka ny toetra ara-teknika (fisorohana) sy ny vidin'ny drôna ho an'ny asa soratra topographic aho, izay zakanao.
Ruben Farias hoy izy:
Febroary, 2019 at
Avy any Chile aho ary te-hanonona ahy ary handefa fampahalalana tena tsara indrindra
Any amin'ny firenena aiza ianao?
Tiako hividy ny vidin'ny drôna aho, mila maika hividy zavatra aho, mahasorena ny tsy manana ny vidiny atolotra rehefa misy zavatra ilaina amin'ny fepetra henjana. Vidin'ny dolara, misaotra.
Enrique Flores hoy izy:
Tiako holazaina ny resaka topograpi sy sary, ary koa ny rafitra sy fandaharana ampiasain'ny drones anao.
Ankasitrahako ny sainao sy ny fotoana.
Jaime hoy izy:
AZO AMPIASAO AZA IANAO OLON'I JEHOVAH
maximiliano rodriguez hoy izy:
Septambra, 2018 at
Manadihady aho azafady mba andefaso ny teny modely 2 na 3 miaraka amin'ny fakan-tsary sy rindrambaiko photogrammetry ity mba hanatanterahana fotografika an'habakabaka sy fanadihadiana momba ny geografia, ho an'ny fampiasana manokana ho teknisiana géométika any Chili.
Eulalia hoy izy:
Mila manao fitetezam-paritra amin'ny alalan'ny alàlan'ny drone miaraka amin'ny fiaramanidina sy ny fiaramanidina mitam-piaramanidina aho ary saripika efa voafaritra, miaraka amin'ny kilaometatra 2 farafahakeliny, alefaso azafady. Misaotra anao
Jairo Garcia hoy izy:
Liana aho handefa ny mombamomba ny drôna sy ny sandan'ny tsirairay avy any Honduras
Franz Paniagua hoy izy:
Miangavy anao hahazo ny Soso-kevitra. Bolivia
Aogositra, 2018 at
Salama tsara izy ireo, nalefan'izy ireo ny lanjan'ny drôma.
Raúl Nava hoy izy:
Tiako ny mividy drone ho an'ny haitao, fa koa manana teknolojia Lidar, rindrambaiko, georeferencing, sns. Mipetraka any atsimo atsinanan'i Meksika aho, azonao lazaina amiko ve ny vidiny?
JAVIER HURTADO hoy izy:
Jolay, 2018 ao
Tsara tolakandro aho dia te-hahalala vidiny ho matihanina dron ho an'ny photogrammetry, indrindra tany izy, fa koa ny fianarana hafa izay afaka manamboatra fitaovana lidar sy ny vidin ny zavatra rehetra (Drone, fakan-tsary, lidar)
Jesosy Elia hoy izy:
Jona, 2018 ao
any amin'ny firenena aiza ianao
Iván Méndez hoy izy:
Fiarahabana. Mila mividy drone ho an'ny fanadihadiana momba ny fananan-trano sy ny asa fitrandrahana an-tanàn-dehibe isika, azafady mba alefaso ny teti-bola drone miaraka amin'ny fitaovana tanteraka (fakantsary sy rindrambaiko photogrammetrika) Manantena aho fa ny valiny.
BRAYAN ARAZA ASTUDILLO hoy izy:
Mey, 2018 ao
Mila mividy drôna aho, azafady mba andefaso ireo quotes miaraka amin'ny vokatra samihafa misy ny orinasanao.
fahatsapana ho irery hoy izy:
Aprily, 2018 at
Salama, arkeology aho, liana amin'io drone io… andefaso ny vidin'ny fitaovana, azafady
riveiro hoy izy:
Oktobra, 2017 ao
Tsara azafady, mifandraisa laharana amin'ny business lehibe
Horacio hoy izy:
Septambra, 2017 at
Tiako ny mijery sary. Panama
Jonathan Acevedo hoy izy:
Aogositra, 2017 at
Salama aho mpanadihady ary te hahafantatra ny vidin'ny drone izaho avy any Meksika
jose ortiz hoy izy:
tsara ny tolakandro Izaho dia mpaka sary tsu, te-handefa teti-bola drone iray miaraka amin'ny fitaovana feno (kamera sy rindrambaiko Topo-photogrammetric) aho, ao Venezuela aho, faly
Juan Grover Antequera Flores hoy izy:
Jona, 2017 ao
Tena mahaliana, te-hanana fampahalalana ara-teknika bebe kokoa aho, indrindra ho an'ny fampiharana kadastrale an-tanandehibe, amin'ity tranga ity raha toa ka azo atao ny mampihatra ny teknolojia LIDAR, ary alefaso ny vidin'ny fanangonana ny rafitra manontolo.
Bigverto Arevalo Chuchuca hoy izy:
Mey, 2017 ao
Tiako ny mividy ireo fitaovana samihafa miaraka amin'ny fampiasana drone mila mahafantatra ny vidin'ny fitaovana voalaza sy ny sofwares ho an'ireny asa ireny. Raha toa ka misy karazana fandoavam-bola azo atao
Mahaliana ahy ny drones, azafady mba alefaso amin'ny teny drone, rindrambaiko, fampiofanana momba ny fanadihadiana momba ny topographie miaraka amin'ny DRON. ary ny fampiharana ny drone, ny rafitra sy ny fifandraisana
FOTOGRAMETRIA hoy izy:
Fitaovana enta-mavesatra na kely ny dronono, izay voafehy lavitra ary noho izany dia tsy mitondra vata, mitondra fitaovana fakan-tsary avo lenta, GPS, sensor sensor ary fehezin'ny fitaovana, amin'izao fotoana izao dia manao vaovao any izy ireo. rehetra, satria mihamaro hatrany ny olona mampiasa azy, miaraka amin'ireo fampiasana sy tombony ananantsika: mahay mamantatra zavatra sy olona izy ireo, mitady fitaovam-piadiana na baomba na hanapotika ny serasera aza hahitana ny mombamomba azy dia zatra izany. manaova sarintany sarintany marina hahazoana sary sy kofehy azo itokisana, sns. Raha tsorina dia tena mahomby ireo fitaovana ireo ary samy ampiasain'ny olona tsirairay araka ny filàny izy ireo ary noho izy ireo dia nanjary fahita manerana an'izao tontolo izao ankehitriny.
jho freddy ramirez hoy izy:
Ny tolakandro tsara azafady azafady mba azonao alefaso amiko ny tenin'ity mailaka ity jhon.ramirez@cancilleria-gov.co
Raúl Villanueva Téllez hoy izy:
Hello !!! Tiako ny filazana ho an'ny drôna miaraka amin'ny fotogrametriá.
Pavel Mariny hoy izy:
Aprily, 2017 at
Salama, mahaliana ahy ny drone iray ho an'ny fijerena horonam-peo, azafady, manome alalana ny fitaovana sy ny vidin-javatra, any Ekoatera aho
juan donoso hoy izy:
Martsa, 2017 ao
Alefaso azafady ny teny nindramina ho an'ny maodely 2 na 3, ity dia ny fanaovana photogrammetry an'habakabaka nomerika, fanaraha-maso ny rafitra sns ... mazava ho azy miaraka amin'ireo fakantsary takiana amin'ireo asa voalaza etsy ambony. Ity dia ho an'ny consultant injeniera any Santiago de Chile.
Miguel A. hoy izy:
Tsara ny tolakandro, azafady, mila mila fanazavana momba ny modely, ny vidiny, ny fotoana famenoana, sns.
Elias Junior hoy izy:
Arahaba, ny torohay momba ny fitaovana, ny endri-javatra, ary ny fandaniana dia ilaina amin'ny laoniny, tiako ny mividy azy ireo saingy tiako ny hahalala hoe inona no antoka ho azy ireo, amin'ny fandaminana ary amin'ny fotoana ny fikojakojana, satria any Lima peru misy orinasa fa olana momba ny fiantohana toy ny fanohanana ara-teknika
Ny fotoana koa ny fametrahana ny fitaovana ho fampiofanana ny rafitra manontolo. jerena
jose alfredo salazar ayerbe hoy izy:
Arahaba isika liana amin'ny drone iray + rindrambaiko ho an'ny sarimihetsika, napetraka ao Colombia,
homera hoy izy:
Febroary, 2017 at
Kisendrasendra amin'ny drone iray mba handrafetana ny mombamomba ny mailako geotopohomero@gmail.com
Jose Legua hoy izy:
Ity helion-type drone ity dia manoro ahy amin'ny fampiasana topografika. Misaotra anao
JACINTO NAVÍO REYES hoy izy:
Janoary, 2017 at
Fiarahabana amim-pitiavana, injeniera sivily sy topografista aho, tiako ho fantatra ny vidin'ny Drone miaraka amin'ny rindrambaiko sy ny fotoana iasana any Kolombia.
Norberto Rodriguez hoy izy:
Tiako ny mahalala ny vola lany amin'ny fitaovana, ny rindrambaiko, ny fampiofanana, ny fotoana fandefasana, ny fomba fandoavam-bola, izaho any Kolombia. Misy solontena eto amin'ity firenena ity ve?
nelsys alvarado hoy izy:
salama tsara maraina mangataka fanazavana feno momba ireo drôna aho. Ny vidin'ny varotra dia manolotra ny fonosana feno sy ny fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasa.
jorge solis hoy izy:
Mangataka fangatahana feno aho azafady
Vanessa Guerra hoy izy:
Desambra, 2016 ao
Vidio azafady, fampahafantarana sy fampiofanana azo antoka.
ESCOBAR hoy izy:
Azafady alefaso azafady: fitaovana, rindrambaiko, fanofanana
Fepetra: Topografia, photogrammetry, fipetrahana amin'ny zanabolana, sns., Automatisation lalam-pifamoivoizana, fahaleovan-tena ambony, sary ary video
LUCIO HILMER HUAMAN GARAMENDI hoy izy:
Novambra, 2016 at
Tiako hividy ny iray amin'ireo drôna ho an'ny asa soratra topografika rehefa mividy azy ireo aho, avy any Però aho, ary miasa amin'ny fanadihadiana momba ny topographic sy hydrologic, road and cadastre.
Marina hoy izy:
Oktobra, 2016 ao
Azonao atao ve ny mandefa sioka ho ahy amin'ny drone intermediate ho an'ny topografika?
jesus vazquez sanchez hoy izy:
Tiako ho fantatra ny vidin'ny drôna sy ny serivisy
Wilberth hoy izy:
Septambra, 2016 at
Fiofanana sy fiofanana ara-teknika ary fiantohana
sebastian castro labozia hoy izy:
Aogositra, 2016 at
Salama maraina, manomana asa mifandraika amin'ity lohahevitra sy fampahalalana tena tsara ity aho ary tiako hihaona amin'ireo mpanoratra anao hampifandray azy ireo amin'ilay asa ...
Mauricio hoy izy:
Jolay, 2016 ao
Tiako ho fantatra ny karazana drôna sy ny sandan'ny azy, misaotra
drone volo hoy izy:
Ny olona liana amin'ny Bolivia dia mifandray amin'ny 78422220
Lucas hoy izy:
Izaho no Geologo sy mahazo aho liana amin'ny teknolojia sarintany sy ny fandrefesana Geo-hanovozan-kevitra, noho izany dia mangataka mba hahafantatra izay ny vola lany tanteraka ny tarika ary inona ny toetra ara-teknika. Ao Arzantina aho
sergio daniel henao hoy izy:
Tsara ny tolakandro dia tena liana tokoa ny hahazo ny vokatra, azafady mba tiako ho fantatra ny vidin'ny tanànan'i Bogota, Kolombia. misaotra betsaka
RUBEN DIAZ PEREZ hoy izy:
IZANY dia TSY MISY MAHASOA ANAO IREO EQUIPMENT, MAHAIZA MIJORO NY FOTOANA
DIEGO INFANTES TORRICO hoy izy:
TSY AZO IZAY TSY MANAIKY AZA MANAO NY FAHAMARINANA MOMBA NY FAHALALANA AN'I COCHABAMBA BOLIVIA IN DOLLARS MISIONERA
Gomez hoy izy:
Azafady mba alefaso ny fampahalalana mba hampihatra ny mombamomba ny mombamomba azy
Harry hoy izy:
Tiako ho fantatra momba ny teny sy fampiofanana momba ny vokatra + entana mankany Bolivia
alex andres mamani perez hoy izy:
Mila fantatro ny rindranasa amin'ny arabe, sidina photogrammetric, kalitao, superposition ny sary, teny nindramina fitaovana 1 …… .Misaotra. Atte. Alex Mamani, Topographer - La Paz Bolivia
Jose de Jesús Madera5 hoy izy:
Isan'ora fandrosoana ara-tsiansa dia manome antsika fomba tsara indrindra ara-teknika mba hanamorana ny asa ary izany no iray amin'ireo fomba, ny fotoana Aver raha toa ny vokatra sy ny ara-toekarena koa manome vola mba ployer.
ivan garcia hoy izy:
Jona, 2016 ao
mahafantatra ny vidin'ny fitaovana sy toro-hevitra
Jorge hoy izy:
salama aho Jorge te hividy ny fonosana manontolo aho hanao fanadihadiana isan-karazany miaraka amin'ny drone izaho avy any Ekoatera misaotra
Cesar hoy izy:
Miarahaba, afaka mandefa ahy ny teny sy ny endriky ny rafitra manontolo + fampiofanana momba ny fanadihadiana momba ny topographie miaraka amin'ny DRON.
elio leon hoy izy:
Hi, avy any Bolivia aho afaka mandefa ny teny sy ny endriky ny rafitra manontolo + fampiofanana momba ny fanadihadiana momba ny topographie miaraka amin'i DRON. Tena liana aho
Winston hoy izy:
vokatra vokatra avy any Chile, Viña del Mar.
Rodrigo hoy izy:
Mey, 2016 ao
Mitantana orinasa injeniera sivily any Ekoatera aho, mila manatanteraka fanaraha-maso ny hetsika amin'ny alàlan'ny drone miaraka amin'ny planina fiaramanidina sy fiaramanidina ary fizahana sary miaraka, miaraka amin'ny sakany 2 kilometatra kely indrindra, alefaso azafady aho,
Tadeo hoy izy:
CLEMENTE ROJAS VALENCIA hoy izy:
Martsa, 2016 ao
Mipetraka ao amin'ny Agustin Codazzi, Cesar departemantan'i Kolombia, manana fandrefesana orinasa hatramin'ny 1985 aho, dia tsy tanteraka-peo, GPS-GRS-1 sy ny GPS amin'ny RTK, te-mampiditra ny orinasa ny drôna mba hanatsara ny kalitaon'ny asako sy ho bebe kokoa mahomby. Tiako ny handefa teny avy amin'ny ekipa manontolo, napetraka ao amin'ny biraoko.
Enzo hoy izy:
Hi, te-hahafantatra ny saran'ny fitaovana sy ny fahazoana azy ireo aho, avy any Arzantina aho. Misaotra anao
Rosa Ayna Huarahuara de Leon hoy izy:
Tena tiako ny mamaky ity fampahalalana ity ary te hividy drone iray feno aho manana orinasa mpanadihady goavana. Alefaso azafady kokoa ny fampahalalana feno sy ny zavatra tokony ataoko mba hividianana.
cesar castagne hoy izy:
Alefaso azafady ny adiresy mba handinihana ny fitantanana drone amin'ny topografia
RUBEN MARTINEZ hoy izy:
Febroary, 2016 at
Miarahaba, jeôgraf aho ary manana ny fahitana aho hamorona masoivoho iray izay tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana ary manolotra izany karazana tolotra izany ho an'ireo tanàna samihafa ao amin'ny fireneko.
Heverinao ve fa azo atao ny manomboka ity asa ity amin'ny fitaovanao?
Afaka manome toro-hevitra momba izany ve aho?
Ohatrinona ny vola tokony hividianako fitaovana raha azo atao izany?
Misaotra betsaka mialoha ary miandry ny valinteninao maika
EUCLIDES FERNANDEZ VILLAORDUÑA hoy izy:
MALAGASY IREO MAHANTRA TANY AMIN'NY PERU
A. White hoy izy:
Tiako ny fitaovana, ho fampiasana fanadihadiana topografika, dia tiako ny hampahafantatra anay ny sandan'ny vola sy ny sambo ho an'i Però.
irving navarro hoy izy:
Ny tolakandro tsara dia tiako ny haka drone miaraka amin'ny photogrammetry, mila mila mahafantatra ny toetra sy ny tarehin'ny teknolojia aho.
Maykel J. Glez hoy izy:
Mila mahafantatra ny vidin'ny fonosana feno aho (Drone Team + Flight Planning + Professional Photogrammetric Software) Misaotra anao.
Pedro hoy izy:
Salama tsara aho raha te hahazo fanazavana momba ity drone ity. Tiako ny hahalala ny vidiny, ny toetrany ary ny fahamendrehana eo
Fernando Penagos S. hoy izy:
Janoary, 2016 at
Injeniera sivily aho ary tiako ny mahazo ny sarintany sy ny sarintany momba ny geografika noforonina noforonina, koa mangataka anao aho hahafantatra ny vidin'ny vondrona iray manontolo ary ny toetoetrany ara-teknika. Ao Colombia aho
Kike hoy izy:
Arahaba, izaho dia injeniera sivily ary manana ny fahitana aho hamorona masoivoho izay tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana sy manolotra ity karazana tolotra ity ho an'ny tanàna samihafa ao amin'ny fireneko
Germán Andrsde N. hoy izy:
Hi, azonao atao ve ny mandefa ahy misy teny sy fehezanteny
Nelson gomez hoy izy:
Tiako ny drone iray ho an'i Colombia
John Pérez hoy izy:
Hi, John Jairo Pérez aho ary tiako ny teny avy amin'ny ekipa topodron an'i Colombia
Carlos Cervantes hoy izy:
Desambra, 2015 ao
Azoko ankasitrahako raha handefa teny avy amin'ny ekipa topographie ho an'i Però aho.
hitsahatra hoy izy:
Tiako ny mahafantatra ireo sanda sy katalaogy, vahaolana feno miomana amin'ny asa an-tselika, ny antoka ary ny mialoha sy ny mividy toro-hevitra, rindrambaiko ho an'ny dingana
Victor Glez hoy izy:
Mangataka famelabelarana momba ny fampiasana drôna aho, ny vidiny sy ny toetrany hanatanterahana fanadihadiana goavana satria te hampihatra izany amin'ny asako aho.
Vicente hoy izy:
Izaho dia injeniera teknisian'ny ala iray natokana ho an'ny famerenana ny trano fonenana. Tiako ho fantatra ny vidin'ny fitaovana tanteraka. Misaotra anao
Ing. cesar chavez hoy izy:
Mila mahafantatra ny vidin'ny fitaovana fanadihadiana drone isika
Sergio Villacañas hoy izy:
Tena tiako ny rafitra Topodron. Mpanentana teknikan'ny Forest aho ary manam-pahaizana momba ny sehatry ny informatika (tahiry). Hitanao ve fa azo ampiasaina ao Espaina mba ho lasa fahaleovan-tena amin'ny famoronana orinasa madinika izay manolotra solo-tena goavana fototra (orthophotography sy modely momba ny tany nomerika) ho an'ny orinasa lehibe sy orinasa mpanorina?
Azonao atao ihany koa ny manome ahy ny antsipiriany bebe kokoa momba ny vidin'ny rindrambaiko ampiasaina sy ny fiofanana miaraka amin'ny rafitra Topodron?
Misaotra mialoha sy miarahaba
Raul hoy izy:
Oktobra, 2015 ao
Miarahaba ny maraina dia tiako ny hahalala ny vidin'ny vondrona mba hanemorana fisaorana amin'ny hoavy
Mario Cusiquispe Quispe hoy izy:
Tiako ny hahafantatra ny toetrany, ny habeny, ny fitaovana feno ho an'ny topografika sy ny zavamaniry, ny vidiny, ny fandoavam-bola ary ny fandefasana.
Misaotra ny valinteninao.
JULIO AUGUSTO SOUZA DEL AGUILA hoy izy:
MANGATAKA QUOTE (VOLA) FITAOVANA DRONIA HANAVOTRA NY FITSIDIHANA ……… .. HANDEFASANA NY PERU
Marco Andrade hoy izy:
Tiako ho fantatra ny vidin'ny drôna ho an'i Ekoatera, misaotra mialoha
atsaharo izy hoy izy:
Tena liana amin'ny fahazoana ny fitaovanareo izahay, te hahita ny sarany sy katalaogy, vahaolana iray manontolo ary vonona hiasa any an-tsaha, miaraka amin'ny toeram-piasanao ao tirra izay mety hisy, fiantohana sy toro-hevitra mialoha sy aorian'ny fividianana, misaotra
A. SALAZAR hoy izy:
Septambra, 2015 at
Feno fankasitrahana aho raha alefako fampahalalana bebe kokoa momba ny vidin'ny fitaovana mifandraika amin'ny fitaovana sy rindrambaiko ilaina amin'ny fanadihadiana topografika, ny famaritana volombava, sns., Misaotra
Juan de Dios Vidal hoy izy:
Mangataka amin'ny teti-bola momba ny fitaovana samihafa azon'izy ireo aho ary raha mampiofana anay amin'ny programa ampiasaina.
Arahaba, tiako ho fantatra ny ohatr'ilay ekipa ... misaotra
JOHANA VEGA hoy izy:
MALAGASY TSY MISY, TSY MISY INTSONY ANY AN-DRANO FOKONTANY, SERIAN SO AMABLOES AMIN'NY FITIAVANA. MISY VEHIVAVY
Wenceslas Sandoval Felix hoy izy:
Aogositra, 2015 at
Azafady, mila fehezanteny ho an'ny ekipa Drones aho.
Tena mahaliana. Ny ekipa dia zava-dehibe ny mahafantatra ny saran'ny fitaovana
ROSA IBAÑEZ NOLLA hoy izy:
Salama tsara aho raha te hahafantatra ny vidiko tena liana amin'ny vokatra
Tiako ny hahalala ny saran'ny fitaovana fisaorana
JOLAY hoy izy:
MITADY FANONTANIANA HO AN'NY CHILE aho
ANDRES a. hoy izy:
azafady mba mila fantatro ny vidin'ny drôna ... misaotra
Dennis hoy izy:
Mahaliana tokoa, ireo ekipa ireo dia ao Però? amin'ny habetsaky ny fivarotany azy ireo ary raha manana lahatsary ao amin'ny youtube izy na zavatra mikasika ny fampiasana azy. azafady alefaso bebe kokoa amin'ny mailaka, misaotra
Miguel Escobar hoy izy:
Tena mahaliana…. Te hahafantatra ny vidin'ny fitaovana aho… .Mipetraka any Peroa aho,
Ivan Cruz hoy izy:
Tiako ho fantatra ny toro-làlana sy teknika momba ny firenena Bolivia izay iainako
Jose Arias hoy izy:
Fiarahabana tiako ny mahafantatra ny vidin'ny fitaovana
Flavio Eduardo Pérez Ochoa hoy izy:
Mahaliana ahy ny karazana fitaovana ananany ho an'ny fanadihadiana an-tsary, ny fandrefesana satelita ny trano ambanivohitra ho an'ny tetikasam-pambolena sy ny loko fotsy, ny lanjan'ny fitaovana feno ho an'ity asa ity ary raha alefa any amin'ny faritra rehetra ao Kolombia.
Misaotra anao, miandry ny valin-teninao haingana.
Alejandro Rodriguez hoy izy:
Jolay, 2015 ao
Misaotra anao aho noho ny fampahalalana bebe kokoa momba ireo modely sy vidin'ny drone. Tahaka izany ihany koa, raha mandefa an'i Kolombia sy ny hasarobidiny izy ireo. Misaotra anao
Gabriel hoy izy:
Hi avy any Chile aho fa liana, mila mahafantatra ny soatoavin'ny drôna aho
Carlos Carvajal hoy izy:
Hello, maraina maraina, manokan-tena ho amin'ny topography aho ary tiako ho fantatra hoe karazana drone izay anananao, modely sy vidiny azonao alefako amiko ireo references azafady amin'ity lahatsoratra ity misaotra betsaka
Hello, maraina maraina, manokan-tena ho amin'ny topography aho ary tiako ho fantatra ny karazana fanomezam-pahasoavana anananao, modely sy vidiny azonao alefaso amiko ireo references azafady amin'ity mailaka ity misaotra betsaka
Robin Enriquez hoy izy:
Hello, ry rahalahy. Tiako ny hahafantatra ny toetran'ireo horonan-tsary topographic, anisan'izany ny vidiny. ny mailako dia rc_ocampos@hotmail.com
Rommel Loachamin hoy izy:
Jona, 2015 ao
Azafady mba mila fanazavana bebe kokoa momba ny karazana drones amin'ny Topografia sy ny fandaniana.
Nelly Saldarraiaga hoy izy:
Mila fanazavana bebe kokoa momba ny karazana drôna sy ny saram-pandrenesana momba ny fijerena sarimihetsika sy ny fampiharana momba ny fandraketana
Mangataka fanazavana bebe kokoa momba ny karazana drôna aho sy ny fandanian'izy ireo amin'ny fampiasana manokana ny sary sy ny sarimihetsika
atsaharo ny tilikambo hoy izy:
Ry tompokolahy malala, nahita ireo horonantsary aho ary nangataka ahy handray teny nalaina, ny drone miampy ny rindrambaiko, ny fiofanana amin'ny fikirakirana azy. Mipetraka ao amin'ny departemantan'i Lima, Faritanin'i Barranca - Però aho, noho izany dia feno fankasitrahana aho raha azonao alefa amiko ilay teny namboarina tamin'ny vidiny rehetra
Yuri Atanacio hoy izy:
Azafady mba alefaso azafady kokoa ny fampahalalana mifandraika amin'ny vola, rindrambaiko, fampiofanana ary fitaovana. Izaho dia avy any Lima Peroa
moral ursula hoy izy:
Mey, 2015 ao
Ry namana tompoko nijery ireo horonan-tsary ary tiako ny afaka mahazo ny teny, ny drone miaraka amin'ny rindrambaiko ary koa ny fampiofanana amin'ny fitantanana azy. Izaho dia mipetraka ao Lima Pero, ao amin'ny distrikan'i Ate, noho izany dia hankasitraka izany aho raha azonao atao ny mandefa ahy ny taham-pahaizana manokana amin'ny vola vidiana rehetra ao amin'ny biraoko.
Mahagaga ny fanehoan-kevitra
Mpitantana ny tetikasa
Salama hitako fa mahaliana, mila fampahalalana sy teny nindramina ho an'ny drôna hanaovana fanadihadiana aho ... misaotra
Tiako ny mahafantatra ny vidiny mba hahazoana ny rafitra topodrona, natokana ho an'ny tetikasa momba ny tetikasa hydraulika avy any Però aho.
Víctor Ortega Morales hoy izy:
Salama aho mipetraka any Chile ary liana amin'ny fahazoana rafitra topodron, afaka mandefa ahy ny vaovao momba ny rafitra sy ny fandaniana amin'ny pesos Shilia.
Fiarahabana sy fisaorana maro.
R2M hoy izy:
Tiako ho fantatra ny vidin'ny drôna ho an'ny fampiharana sivily
Carlos Alberto Rosas hoy izy:
Te hahafantatra ny vidin'ny drone sy ny vidin'ny fiofanana amin'ny fikirakirana azy aho, eto Barrancabermeja, Santander, Colombia aho ... misaotra
Alejandro Badillo hoy izy:
Aprily, 2015 at
Tiako ho fantatra izay fitaovana ananany ary ohatrinona izy ireo no vidiko any Bogota Kolombià manana dronono ho an'ny filamacion dji phantom tiako ho fantatra raha azon'izy ireo atao izany karazana asa izany amin'ny fividianana ny fiantsonana sy ny programa
Bill hoy izy:
Ankasitrahako izany raha toa ka hampahafantarinao ahy ny vidin'ny Drone mpanadihady.
Tiako ny hampiditra azy io ao amin'ny rafi-pandrefesana.
NAPOLEON CAVE WAR hoy izy:
MANDEHANA IZAY IREO TOKONY D DRONES SY NY FANAZAVANA AMIN'NY FITIAVANA IREO
diana sofia blackburn hoy izy:
Martsa, 2015 ao
Tiako ny hahafantatra ny vidiny mba hahazoana ny rafitra topodron, manana orinasa iray ao Cali-Kolombia aho, izay natokana ho an'ny mpanolo-tsaina ao amin'ny topography.
Franco Montero hoy izy:
Ry malala, mahaliana ahy ny mahazo ny fitaovana am-peo miaraka amin'ny fampiasana drone mila mahafantatra ny vidin'ny fitaovana sy ny zavatra rehetra ilaina ary ny sofwares ho an'ireo asa ireo.
freddy ticona hoy izy:
Febroary, 2015 at
Hi, avy any Peru aho. Tiako ny mividy fitaovana toy ity iray ity (topodron) ho fanadihadiana momba ny topografika, ny tarehimarika fitaovana sy ny vidiny.
Janoary, 2015 at
Tonga lafatra, efa manana izany ianao, izaho mijanona ho anao.
Mifandraisa amiko ao amin'ny tranokalako, dot topographic services sy ny fanaraha-maso samihafa ary OS afaka mifandray amin'izy ireo, OS azoko omena ny hevitro ary nanapa-kevitra. Ao amin'ny tranonkala dia manana ny fampahalalana rehetra misy ahy ianao, Drone Ispan STA
ATyges hoy izy:
Avy amin'ny ATyges, mpanamboatra ny rafitra Topodron, te-hisaotra ny fahalianana nasehon'ireo mpamaky Geofumadas izahay. Ny rafitray eoropeanina dia efa miasa any amin'ny firenena amerikana tatsimo maro toa an'i peru, bolivia, ekoatera, chili, colombia, ...
Raha mila fanazavana manokana momba ny rafitra ianao dia afaka mifandray amin'ny: uav@atyges.es, amin'ny laharana 0034952020600 na amin'ny alalan'ny kaonty Skype: atyges
Mifandraisa amin'ny tranokalan'ny Atyges.
Manontany ny momba an'i Federico.
Manana iray amin'izy ireo aho, octo.
Walter hoy izy:
Hi, avy any Peru aho, Cusco. Mila mividy drôna roa aho mba handinihana asa izay tiako ho fantatra bebe kokoa,
Juan Carlos hoy izy:
Hiarahako namana any Però aho ary mila fampahalalana momba ny ekipa voalaza, ny vidiny sy ny fotoana fialan-tsasatra, ny fampahalalana rehetra alefako amin'ny mailaka misaotra.
Peter Tapken hoy izy:
Desambra, 2014 ao
Hello, in http://www.geo-matching.com Manolotra ny mombamomba ny vahaolana tsy misy fiaramanidina isika. Eto ianao dia afaka mampitovy ny vokatra ary mamaky ireo fanehoan-kevitra. Tena nanolo-tena!
Alfredo Navarro hoy izy:
Tiako ny mahalala ny vidin'ny vokatra miaraka amin'ny fitaterana any amin'ny Repoblika Dominikanina
David Nelson Sanchez F hoy izy:
Novambra, 2014 at
Tiako ny mahalala ny vidin'ny vokatra amin'ny fanomezana any Bolivia na Paragoay.
Norberto Alfaro C. hoy izy:
Alefaso azafady ny sarany, ny fiofanana sy ny fotoana fandefasana ny programa topodron. Izaho dia ao Santiago, Chile
Miguel A. Montero hoy izy:
Ny tolakandro tsara dia liana amin'ny fahazoana drone aho mba hanao topografia, mila mahafantatra ireo toetra sy tarehimarika ara-teknika aho.
Hi, tiako raha tianao handefa ahy ny vidin'ny fitaovana, satria tsy hitako izany.
Septambra, 2014 at
Ary avy aiza amin'ny firenena no manoratra anay?
David Ortiz hoy izy:
Ny tolakandro tsara dia mpandraharaha tsy miankina aho ary manana ny fahitako ny famoronana masoivoho iray izay tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana ary manolotra ity karazana tolotra ity ho an'ny tanàna samihafa ao amin'ny fireneko.
Manomana ny fanadihadiana an-tampon'ny 25 000 ve isika any amin'ny avaratry ny firenena, miaraka amin'ny sanda 1 momba ny fihenanam-pahefana, miaraka amin'ny rafitra misy azy, moa ve izany? amin'ny firy?
Ohatrinona ny saran'ny rafitra manontolo?
Tianay ny mandefa anay vaovao sy vola amin'ny antsipiriany, ary koa ny fanofanana ny mpiasa
Solis Topografie sy Geodrosy Satelital Eirl Engineering
Manuel Arroyo Caceres hoy izy:
Aogositra, 2014 at
Tiako ny mividy ireo fitaovana samihafa miaraka amin'ny fampiasana drone izay mila fantatro ny vidin'ny tsirairay avy amin'ny fitaovana ilaina rehetra ary koa ny sofina ho an'ireny asa ireny.
Ary koa ny fotoana fandefasana ireo fitaovana ary koa ny fampiofanana ny rafitra iray manontolo dia hanana toerana fivarotana any Lima - Peroa
Victor Hugo Garcua Siancas hoy izy:
Tsara ny tolakandro, tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny vidin'ny fitaovana… misaotra
MOISES PAYTAN VILLAVICENCIO hoy izy:
Jolay, 2014 ao
Tiako hividy ny iray amin'ireo drôna ho an'ny asa soratra topografika rehefa mividy azy ireo aho, avy any Però aho, ary miasa amin'ny fanadihadiana an-tsary sy fikarohana momba ny rano
kengi nakamura hoy izy:
Aprily, 2014 at
Hi, manana fanontaniana miaraka amin'ny rindrambaiko aho, inona no tianao holazaina amin'ny omega phi sy kaapa?
Manomboka mahazatra ity rindrambaiko ity isika ary tsy takatsika ireo hevitra ireo
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao